काम पाइने आशमा दलालमार्फत भिजिट भिषामा दुबई आउँदै हुनुहुन्छ ? एक पटक अबश्य पढ़नुहोस – साँचो खबर
काम पाइने आशमा दलालमार्फत भिजिट भिषामा दुबई आउँदै हुनुहुन्छ ? एक पटक अबश्य पढ़नुहोस
यूएई । पछिल्लो समय रोजगारीको नाममा युएईको दुबई लगायत अन्य खाडी मुलुक भिजिट भिषामा आउने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइन्छ। कोरोनासँगै गुमेको रोजगारी र बेरोजगार बनेका नेपाली युवाहरु फेरि रोजगारी पाउने आशामा दलाललाई लाखौँ रकम तिरेर खाडी मुलुक छि’रिरहेका छन्। कोरोनाको महामारीले विश्व नै लकडाउन भएसँगै धराशायी बनेका केही म्यानपावर व्यावसायी, ट्राभल्स एजेन्सी र (ब्रो’कर) द’लालहरु अहिले बिस्तारै सलबलाउन थालेका हुन्। जसको माध्यमबाट से’टिङ मार्फत भिजिट भि’षामा सजिलै नेपाली युवाहरु यूएई लगायत अन्य खाडी मुलुक ध’माधम आइरहेका हुन्।
यूएई सरकारले पछिल्लो समय अन्य मुलुकबाट कामदार आयात गरेको छैन। कोभिड-१९ को म’हामारीका कारण बेरोजगार भई यूएईमा नै भएको जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको नी’ति रहेको छ। विगत ६ महिनाको अवधिमा को’भिड-१९ को कारण धेरै कम्पनीहरुले का’मदार संख्यामा क’टौती गरे। धेरै नेपाली कामदारसहित अन्य मुलुक भारत, पाकिस्तान र बङ्लादेशका का’मदारहरु मुलुक फर्किए । तर हालको अवस्था सामान्य हुने क्रममा रहेकाले ती कम्पनीहरुमा केही थोरै संख्यामा कामदारहरुको मा’ग ब’ढ्न थालेको छ।
यही अवस्थालाई सदुपयोग गर्दै नेपालका केही म्या’नपावर व्यावसायी, ट्रा’भल्स एजेन्सी र (ब्रो’कर) द’लालहरु स’लबलाउन थालेका हुन्। उनीहरुले बेरोजगार नेपाली युवाहरुलाई राम्रो काम लगाइदिने प्र’लोभन देखाएर से’टिङ मार्फत भिजिटमा ल्याएर अलपत्र पार्न थालेका छन् । बेरोजगारले आ’जित भएका नेपाली युवाहरुलाई (ब्रो’कर) द’लालले राम्रो काम लगाइदिने बहानामा लाखौं रकम अ’शुल्छन्। तर उनीहरुले न भने जस्तो काम दिन सक्छन्। न उठाएको रकम नै ! अन्त्यमा द’लाल सम्पर्कविहीन (फ’रार) हुन्छन् । पी’डित झनै पी’डित बन्छन्। पी’डितसँग न काम गर्ने प’रमिट नै हुन्छ। न बस्ने भिषा।
यूएई सरकारले दुबई बाहेक अन्य ६ वटा राज्यमा त’त्कालको लागि भिजिट भिषा बन्द गरेपनि दुबईलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रोजगारीको लागि थुप्रै नेपालीहरु भिजिट भिषामा आएका हुन्। उनीहरुको स’मस्या विस्तारै बाहिर आउन थालेको छ। विभिन्न म्यानपावर व्यावसायी, ट्राभल्स एजेन्सी र ब्रोकरहरुको मेलेमतोमा दुई पक्षीय सम्झौता अनुरुप काम नपाएपछि केही नेपालीहरुको स’मस्या बाहिर आएको हो। न’क्कली अफर लेटर देखाएर भि’जिटमा ल्याउने र यूएई ल्याएर क’न्स्ट्रक्सन र लेबर स’प्लाई कम्पनीहरुमा महिनाको ८ सय देखि १ हजार दि’र्हाम तलबमा काम लगाउने उ’दारहणहरु प्रशस्तै भेटिन्छन्।
यूएई आईसके पछि ध’म्क्याएर जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुन दबाब दिने गरेको पाइएकाे छ भने कतिपयले जा’गिर लगाइ दिएबापत एक महिनाको तलब पनि लिने गरेका छन्। काठमाडौं एक म्यानपावरबाट गत २ हप्ता पहिले यूएईको एक प्रतिष्ठित अ’ल्मराई कम्पनीमा काम लगाईदिने भन्दै सप्तरीका मो’हम्मद नुरुल,मो. स’लाउद्दीन, इ’झारूल ह’क र जीव्छ साहलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर एक महिने भिजिट भिषामा दुबई पठाइयो। म्यानपावरले अ’ल्मराई कम्पनीबाट तीस जनाको डि’माण्ड आएको भन्दै उनीहरुलाई चाँडै जान भन्यो।
उनीहरुलाई दुबई पठाउने एजेन्ट सिराहाका मो’हम्मद हासिम मियाँ थिए। तर उनीहरुसँग भएको सबै कागजपत्र न’क्कली भएकोले ए’जेन्ट मि’याँले भनेजस्तो काम पाएनन्। म्यानपावर र तिनका एजेन्ट हा’सिम मियाँले उनीहरुलाई न’क्कली अ’फर ले’टर बनाएर पठाएको पाइएको छ। उनीहरुको यूएई बस्न पाउने समय अ’वधि अब १४ दिन बाँकी छ। दुबईमा उनीहरु अहिले अ’लपत्र अवस्थामा छन्। कोरोनाको कारण विश्वको अ’र्थतन्त्र ग्र’सित भैरहेको बेला त्यसमा पनि धेरै रो’जगारविहीन छन्। यूएईमा दक्ष र अनुभवी ज’नशक्तिहरुको कमी छैन ।
कोरोनाकै कारण धेरै श्रमिक न्यून पारिश्रमिकमै भए पनि काम गर्न नपाएर भौ’तारी रहेको अवस्थामा छ। त्यसैले विना अ’नुभव, द’क्षता र तालिम नपाएकाहरुले भिजिट भिषामा काम पाउनु भनेको प्रायः अ’सम्भव नै हुन्छ। त्यसमाथि का’नुनी ज’टिलता लगायत अन्य स’मस्या; जस्तै बिरामी परेर अन्ततः मृ’त्यु नै हुन पुग्यो भने त झन् पारिवारिक स’मस्या हुने निश्चित हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले तो’के ब’मोजिम इ’जाजत प्राप्त म्यानपावर एजेन्सीबाट सरकारी मा’पदण्ड अनुसार श्रम स्वीकृति र बीमा गरेर बैदेशिक रोजगारीमा आउनु पर्छ। यसरी आउँदा पनि सबै सपना पूरा भैहाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
तर कुनै कारणले त्यस्तो जटिल स’मस्या आइहाल्यो भने रोजगारदाताले समस्या स’माधान गर्न सक्छ। यदि रोजगारदाता वा समन्धित कम्पनीले कामदारको समस्या स’माधान गरेन भने र नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बाटो खुल्ला हुन्छ। बीमा कम्पनीले क्ष’तिपूर्ति दिन्छ जसले केही मात्रामा भए पनि परिवारलाई राहत मिल्छ। नेपालबाट बिना श्रम स्वीकृति वैदेशिक रोजगारको लागि कुनै पनि देश जानू भनेकै आफ्नो जिवन क’ष्टकर बनाउनु हो,भनेर सबैले बुझ्न आवश्यक छ । भिजिट भिषा भनेको भ्रमण गर्ने (घुम्ने) अनुमति पत्र हो।काम गर्ने प’रमिट हैन। त्यसैले आजैबाट भिजिट भिषामा आएर काम खो’ज्नु हुदैन भनेर सचेत बनौं।
Previous: कोरोना जितेका मनोज गजुरेल यस्ता देखिए, फेसवुकमा लेखे यस्तो अनौठो सन्देश
Next: कोरोना विरुद्धका खोप कानुनी बाटाे खुल्याे, भण्डारण समस्या, क्षमता थप्ने तयारी